Samsung Galaxy Note 4, dareenka ugu horreeya ee fiidiyowga | Wararka Gadget
Berri ah Samsung Galaxy Note 4, shirkadda 'facblet' ee jiilba jiilba, isku sii adkeynaya mowqifkeeda bulshada dhexdeeda taas oo raadineysa wax ka badan shaashad ballaaran oo taleefannada casriga ah, iyagoo raadinaya qiimayaal kale oo lagu daray sida kuwa ay bixiso S-Pen ee la socda tan mobile
Samsung Galaxy Note 4 waxaa naloo soo bandhigay mid ka mid ah SoC-yada ugu awoodda badan ee hadda suuqa ku jira, Qualcomm Snapdragon 805 afar geesle ah 2,7 Ghz. Tani waxay la socotaa 3 GB ee xasuusta RAM, waxay ka dhigeysaa Galaxy Note 4 inay si fiican u muujinayso xitaa markaan isku dayeyno inaan ku fahanno barnaamijyo aad u awood badan ama ka faa'iideysano awoodaheeda badan.
Tani waa mid aad muhiim u ah inaad ku raaxeysato khibrada ugu fiican ee isticmaale adiga oo aan niyad jabin, sameynta fikradda waxsoosaarka ayaa loo qaaday heer cusub waligaa laguma arag taleefanka casriga ah.
Shaashadda Samsung Galaxy Note 4 waxay leedahay jaantus ah 5,7 inji iyo Quad HD qaraarka (2560 x 1440 pixels) oo ay bixiso gudigeeda Super AMOLED. Dejintu waxay na siineysaa sawirro iyo fiidiyowyo leh qeexitaan la yaab leh, oo ay ka buuxaan midabbo firfircoon oo aan wax u dhimayn xaglaha aragtida, oo ah mid laga taxaddaray jiilkan terminalka.
Heerka bilicsanaanta, Samsung Galaxy Note 4 wuxuu leeyahay a jir bir ah in kasta oo wax soo saarkeeda ugu weyni ay weli tahay caag. Dhabarka gadaashiisa waxaan ku leenahay dabool leh shay adag oo door bidaaya qabashada oo siineysa taabashada kala duwanaanta.
Xuquuqda aaggan waxaan ka helaynaa kamaradda dambe ee dambe 16 megapixels kaas oo markii ugu horeysay lagu daro xasilinta indhaha istaandarka si looga fogaado ama loo yareeyo saameynta "blur" ee ka dhex muuqda sawirrada iyo fiidyowyada xaaladaha nalalka liita. Hoos waxaa ku yaal iftiinka LED-ka iyo dareeraha garaaca wadnaha si uu u qaato garaaca wadnaheena waqti kasta oo uu ku qoro arjiga S-Health.
Dhammaan sawirrada iyo fiidiyowyada lagu duubay Samsung Galaxy Note 4 waxaa lagu keydin karaa 32 GB ee xusuusta gudaha ah, in kastoo haddii aan dooneyno, waxaan fursad u leenahay inaan gelino kaarka microSD ah illaa 128 GB si aan u helno tirada aan la tixgelin karin 160 GB, waa wax ay rabaan dhammaan kuwa doonaya inay la socdaan dhammaan qaybaha sawirradooda ama ururinta muusigga.
Way cadahay in qalabkan oo dhami waa inuu ku shaqeeyaa batari awood weyn leh waana. 153,5 x 78,6 x 8,5 milimitir oo ay xaddiga Note 4 u saamaxday Samsung inay gasho batteri 3.220 Mah markaa ismaamulku dhibaato ma leh. Markaad amreyno boosteejada, waxaan leenahay dekedda microUSB ee caadiga ah in kasta oo nidaam lacag-bixin deg deg ah ay gacan ka geysaneyso dedejinta howshan si loogu diyaariyo waqti yar.
1 S-Pen, halyeeyada dhabta ah ee falsafada Galaxy Note
S-Pen, halyeeyada dhabta ah ee falsafada Galaxy Note
Ilaa maanta, waa wax aan macquul ahayn in laga fekero Galaxy Note la'aanteed casriga + S-Pen binomial. Samsung way ogtahay tan waana sababta shirkadda stylus smart ay mar kale u tahay geesiga Galaxy Note 4.
Iyadoo kororka tiknoolajiyada cusub, awooda qoraalka Waxaa looga tagay asalka, luminta dareenkaas iyo shucuurtaas aan inta badan ku gudbinno wax fudud sida qorista "waan ku jeclahay" qoraal. Samsung waxay dooneysaa inay la soo noqoto falsafadan wax qorista iyadoo la adeegsanayo S-Pen aad u sax ah oo runti naga dhigeysa inaan ilaawno inaan shaashad ku qoreyno.
Caddaynta tani waa xitaa Montblanc waxay saxiixday inay iskaashi la sameyso Samsung Wuxuuna u diyaariyey qalinkiisa isha il gaar ah leh teknolojiyada S-Pen kuwa doonaya inay ku khamaaraan shirkad soo saareysay alaabooyinka la xiriira qoraalka, saacadaha iyo waxyaabaha kale ee raaxada inta ay nool yihiin.
Sidaan horeyba uga faallaynay bilowga boostada, Samsung Galaxy Note 4 wuxuu safarkiisa Spain ka bilaabanayaa berri. Qiimaha lagu calaamadeeyay soo saaraha ayaa ah 749 euros Waxaana lagu heli doonaa midab madow, caddaan, casaan ama dahab oo soo jiita dad badan.
Xaqiiqdii, Samsung ayaa mar kale jebin doonta rikoorkeeda Alaabtan iyada oo ay ugu wacan tahay ahmiyadda ay saareen in ay sii hagaajiyaan wax soo saarka marka loo eego milkiilayaasha qaabkii hore, horay ayey u wareegsanayd.
Macluumaad dheeraad ah - Samsung
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » Telefoon » Mobiles » Samsung Galaxy Note 4, dareenka ugu horreeya ee fiidiyowga
Sida loola soo degsado cusbooneysiinta aan lala socon Windows Downloader
Dhammaan heshiisyada Halloween ee loogu talagalay PlayStation Store